Emotional Intelligence ဆိုတာမျိုးက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သလောက် ကျယ်ပြန့်ပေမယ့် အကျဉ်းချုံး အလွယ်ပြောရရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်စွာ ခံစားမျှဝေနားလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ ပါဝါ ၊ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ တဖက်လူရဲ့ ခံစားချက်ခြား မှာ ချင့်ချိန်စဉ်းစာတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူ ဘယ်လို တွေးတောသင့်တယ် ဘယ်လို ပြုမူသင့်တယ်ဆိုတာမျိုး ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ဆုံးဖြတ်တတ်တာမျိုး၊ မိမိ အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှု တစ်ခုလို့ အကျဉ်းဖျင်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Life Lessons You Can Learn From Mark Zukerberg
▪️ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးသော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Facebook ကနေ တဆင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ ရဲ့ နေထိုင်ဆက်သွယ်မှုတွေ၊ သူငယ်ချင်းဖွဲ့ပုံတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ စီးပွားရေး ဈေးကွက်တွေ၊ ဈေးကွက်ဖြန့်ချဲ့မှုတွေကစလို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့တာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲ စိတ်ထဲ ဘာတွေ ရှိနေလဲက စလို့ What’s on Your Mind? ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်းနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ “Mark Zukerberg” ဆီက ကျွန်တော်တို့ လေ့လာသင်ယူသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို အချိန်ခဏလောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
What to do after Matriculation Exam
🔸 တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးစီးသွားကြတဲ့အချိန် ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံးလိုလို ခံစားမိတာက တစ်နှစ်တာလုံး နေ့ရော ညပါ မနားမနေ စာကျက်ခဲ့ရာကနေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘာတာဝန်မှ မရှိတော့တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဘာဆက် လုပ်ကြရမလဲဆိုတဲ့ ဟာတာတာ ခံစားချက်ကြီး ရလိုက်တာပါပဲ။ 🔸 ဆိုတော့ အကယ်၍များ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးသွားတဲ့ အားလပ်ချိန်တွေ အကျိုးမဲ့အချိန်မဖြုန်းမိအောင် ဘာများလုပ်ရပါ့မလဲ ၊ ဦးနှောက် ဘယ်လိုများ ဆေးကြောရပါ့မလဲ တွေးနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ဒီလို တွေးနေတဲ့ မောင်လေး၊ညီမလေး ၊ တူ၊တူမလေး တွေ များရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Post လေးကို တစ်မိနစ်လောက်အချိန်ပေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ။
Life Lessons You Can Learn From Steve Jobs
🔸 Steve Jobs ဆိုတဲ့ အမည် နာမ ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာ အထူးတလည် ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ညွှန်းဆိုနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Apple ကို ပြေးမြင်ကြမယ်။ ၂၁ ရာစုရဲ့ အကောင်းဆုံးသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ သူမတူအောင် ကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်ပြောင်းလဲ စေသူ တစ်ယောက် ဆိုတာ လူတိုင်း လေးစားစွာ လက်ခံ ထားကြသူ တစ်ယောက်ပါ။ 🔸အကယ်၍များ သင်က ဘဝမှာ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှ အရည်အချင်း အားလုံးကို ကြိူးစားထုတ်ဖော် အသုံးချရင်း အောင်မြင်မှု လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ခင်းချင်သူဆိုရင်တော့ Steve Jobs ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ခံယူချက် တွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အတုယူ အားထား စရာ သင်ခန်းစာတွေလို့ လို့ ဆိုရမှာပါ။ 🔸 ဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲ ခဲ့သူ Steve Jobs က ဘယ်လို ခံယူချက်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုအထွဋ်အထိပ်လမ်းကို ဖောက်ခဲ့သလဲ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျ။
How to Practise Ethical Decision Making
• တစ်နေ့အတွင်း ကျွန်တော်တို့ Decision Making လို့ ခေါ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးတွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် အကျဉ်းအားဖြင့် လုပ်ရလေ့ရှိလဲ ? ဒီနေ့ ဘယ်သွားမယ် ဘာစားမယ် ဆိုတဲ့ အသေးအဖွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကနေစလို့ ကျောင်း၊ အိမ်၊လုပ်ငန်းခွင်၊မိသားစုနဲ့ ဘဝအတွက် ရွေးချယ်ရတဲ့ ကြီးကြီးမားမား ရွေးချယ်မှု မျိုးတွေ အထိပေါ့။ • အဖြေကတော့ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ စက္ကန့်မိနစ်တိုင်းဟာ ရွေးချယ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ချည်း တည်ဆောက်နေရတာမို့လို့ပါ။ ဒီနေ့တော့ ဘယ်အချိန်မှ အိပ်ယာထပြီး နေ့လည်စာ ဘာ စားမယ် ဆိုတာကစလို့ ဘယ်လို Career Pathway တည်ဆောက်ပြီး ဘ၀ ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတာတွေက အားလုံး ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြတာချည်းပါ။ • ဒီမှာ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းအစစ်မှန်က ကျွန်တော်တို့ ဘဝရဲ့ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မှုတွေ အားလုံးက ဘဝအတွက် သမာသမတ်ကျတဲ့ Ethical Decision Making ရော ဖြစ်နေရဲ့လား ဆိုတာပါ။
20 Self-Reflection Questions You Should Ask Yourself for Personal Growth
🔸 အကယ်၍များ သင်က အခုရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ရပ် မနေချင်သူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကသော အကောင်းဆုံးသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဆိုတာကို သိရှိနားလည်ထားသူ ၊ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ မက်ရင်း ပန်းတိုင်ကို တလှမ်းချင်း တက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေသူ တိုးတက်ချင်တယ်၊ ကြိုးစားချင်တယ်၊ အကောင်အထည်ဖော်ချင်ပေမယ့် လမ်းပျောက်နေတယ်လို့ ခံစားနေရသူ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ပထမဦးစားပေး ပြင်ဆင်သင့်တာက သင့်ကိုယ်သင် လိုတာထက် ပိုသိေစေနိုင်ဖို့ရာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေ အချိန်ပေးပြီး ခဏ ဖတ်ကြည့်ရင်း ကိုယ်တိုင် သုံးသပ် ကြည့်ဖို့ အကြုံပြုပါရစေ။
Life Lessons You Can Learn From Jack Ma
💡 ဘဝ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် ဂျက်မားဘယ်လိုမြင်လဲ? “If you don’t do it, nothing’s possible.” ဂျက်မား ပြောခဲ့တာပါ။ ဘာမှ မလုပ်သရွေ့ ဘာမှလည်း ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဂျက်မားလို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ အထူးတလည် ညွှန်းပြီး ရေးနေစရာတော င်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။။ 🔸 အကြမ်းဖျင်း မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Net Worth $20 Billion ကျော်နဲ့ Work Ethic အရှိဆုံးသော၊ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာ တစ်ယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပြီး E-commerce Web Portal ဖြစ်တဲ့ Alibaba ရဲ့ Founder & CEO တစ်ယောက်ပါ။ 🔸 ယနေ့ခေတ်ရဲက အအောင်မြင်ဆုံး နဲ့ အချမ်းသာဆုံးသော စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာဖို့ဆိုတာ အခက်အခဲ ဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလိုမျိုး နာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့ လူတိုင်းလေးစားအားကျရပြီး ဒီနေ့ဒီနေရာကို ဘယ်လောက်ထိ ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း ရောက်လာခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလို စိတ်ဝင်တစားကို သိရှိနေကြပြီးဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဘဝ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ် ထင်မြင်ချက်တွေကို အားလုံး လေ့လာ မှတ်ယူလို့ ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Mistakes that You Are Doing Without Knowing Yourself
မေးခွန်းလေးတစ်ခု ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ရအောင်။ တစ်နေ့တာမှာ ကျွန်တော်တို့ အမှားဘယ်နှစ်ခုလောက် လုပ်ခဲ့လဲ မှတ်မိကြလား? 🧐 သတိကောင်းတဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ မှတ်မိဖို့ လွယ်ပါလိ့မ်မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုက ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမပြုလိုက်မိတဲ့ အမှားတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်ရော? နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားသွားရပြီနော်။ ဒီတော့ တွေးကြည့်မိတာက တစ်နေ့တာမှာ ကိုယ်သတိလက်လွတ် ပြုလုပ်မိတဲ့ အမှားတွေဘယ်နှစ်ခုလောက်တောင် ရှိနေမလဲ? ဘယ်လိုအမှားအမျိုးတွေ ဖြစ်မလဲ?